SOICARE G78 280ml girazi yemishenjere / simbi inotonhorera mwando inodziya mwenje ultrasonic yakakosha mafuta diffuser, China SOICARE G78 280ml girazi bamboo / simbi inotonhorera mhute inodziya mwenje inokachidza yakakosha oiri diffuser Vagadziri, Vatengesi, Fekitori - Sunpai Industries Limited
Mvura isina akateerana
Comment kunhuhwirira diffuser
SOICARE G78 280ml girazi yemishenjere / simbi inotonhorera mhute inodziya mwenje ultrasonic yakakosha mafuta diffuser
Michina pfundo Control - Unogona kuseta mhute, nguva uye mwenje neichi chete pfundo. Zviri nyore kwazvo kushanda.
Zvinhu zvakasikwa - Bamboo base, Girazi rinovhara. Ipa iwe chigadzirwa chakachengeteka. Uye kukupa iwe yakasarudzika kunzwa.
Fomu uye Rinoshanda: Dhizaini yazvino uye yakapusa kuenderana nekamuri yako yekushongedza; 5-in-1 mutifunction: aromatherapy diffuser, humidifier, mhepo yekunatsa, ionizer, uye LED color inoshandura husiku mwenje.
Max Zvemukati: Iyo inonhuwirira inoshambadza inobata 300ml yemvura uye inomhanya kwemaawa pane isingade kuzadzikiswa. Iine hukuru hwakakura, inoburitsa mhute yakasimba uye kunhuwirira. Mhute inoonekwa zvakanyanya pakumisikidzwa kwepamusoro iyo yakanaka kune yakakura imba.
Yepamberi Ultrasonic Technology: Iyo inonhuwirira diffuser inoshandisa magetsi emagetsi kugadzira kudengenyeka pa frequency ye2.4 mamirioni nguva pasekondi inovhuna mvura uye maoiri akakosha kuita akanakisa madiki-mairi pasina kushandisa kupisa.
Yakaoma Kuchenesa: Kusiyana nezvimwe zvinonhuwirira zvinoputira nemabhodhoro ayo akaomesesa kubata uye kuvhura, iyi inogona kungosimudzwa kuti izadze nekuchenesa.
Kushomeka kwemvura Kudzivirirwa
Bamboo + Girazi / Aluminium + Girazi
Rotary pfundo kudzora
Inoenderera kana inopindirana
Oiri & Mvura
560mm * 400 * 410 (12pcs)
SP-USB04 50ml USB Mafuta Dhivhizheni Ultrasonic Mota Humidifier
SP-G10B SOICARE 180ml Ultrasonic Mhepo Humidifier Mwedzi Mwenje Aromatherapy Magetsi Bamboo Ceramic Diffuser